मणिपालले भर्ना नलिएका शिशुका बावुआमा संक्रमित | eAdarsha.com
मणिपालले भर्ना नलिएका शिशुका बावुआमा संक्रमित
पोखरा । महिनादिन पनि नपुगेका शिशु अस्पतालको एउटा कोठामा छन् । बावुआमा अर्कोमा । उनीहरु तिनै जनालाई कोरोना संक्रमण छ । २८ दिनअघि सुत्केरी भएकी कामना छोरालाई दुध खुवाउन कतिकति बेला गए पनि बावु जानबहादुरले अघिलो दिनदेखि छोराको मुख हेर्न पाएका छैनन् ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर उपचार भइरहेपछि भर्खरै जन्मेको छोराको नियास्रोले बावुआमाको दिन बित्छ । रातमा झस्काउँछ । रोल्पाका जानबहादुर बुढा मगर, उनकी २३ वर्षीया श्रीमती कामना र २८ दिने शिशुमध्ये पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको सुत्केरी वार्डमा दम्पतीलाई एउटा र शिशुलाई अर्को कोठामा अलग–अलग राखेर राखेर उपचार भइरहेको हो ।
‘कहिलेकाहीँ दुध खुवाउन त जान्छु, तर धित मरुञ्जेल काखमा राख्न पाएकी छैन्,’ कामनाले भनिन्, ‘उहाँले झन् हिजोदेखि हेर्न पनि पाउनु भएको छैन ।’
जानबहादुरले छोराको साह्रै याद आउने बताउँछन् । ‘पहिला त औषधी लिएर जाँदा देख्थे,’ जानबहादुरले भने, ‘हिजोदेखि मलाई पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उता गएको छैन ।’
रोल्पाबाट कामकै लागि आएका जानबहादुरको पोखरा सहरमा आफन्त भनेकै श्रीमतीमात्रै हुन् । अनि भर्खरै धर्तीमा पाइला टेकेका छोरा । उनलाई खाना पु¥याइदिनेसम्म मान्छे छैनन् । धन्न यी निमुखालाई अस्पतालले खाना प्रबन्ध मिलाइदिएर सुविस्ता भएको छ । कोरोना देखिनुअघि उनको कोठामा लगेको खाना पु¥याउने टिफिन, हटकेस, थर्मस, घ्यूका बट्टा र केही पानी खाने बोतल मात्र छन् । खानालाई त उनलाई कुनै सुर्ता छैन तर सुत्केरीलाई खुवाउने घ्यू सकिएपछि कस्ले ल्याइदिएला भन्ने पिरलो थियो । ‘खाना त अस्पतालले दिएको छ,’ उनले भने, ‘भर्खरकी सुत्केरीलाई खुवाउने घ्यू सकिएपछि के गर्ने, उनी साह्रै कमजोर भएकी छिन् ।’
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको सुत्केरी वार्डमा दम्पतीलाई एउटा र शिशुलाई अर्को कोठामा अलग–अलग राखेर राखेर उपचार भइरहेको छ ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा जन्मिएका छोरामा २१ दिनमा कोरोना देखियो । अस्पतालमै पिसिआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको हो । यो घटनाले बुढा मगर दम्पतीको अर्को बज्रपात आइप¥यो । मणिपालले ९० हजार धरौटी र दैनिक २२ देखि २८ हजारसम्म खर्च लाग्ने सुनायो । मजदुरी गरेर कमाएको पैसा मणिपालमै सुत्केरी गराउँदा र स्याहार सुसारमा सकिसकेको थियो । खल्तीमा भएको केही हजारले पार नलाग्ने देखेपछि त्यो बेला नै अस्पतालमा हारगुहार गरेका थिए ।
मणिपालबाट पैसा जम्मा गर्ने तपाईको समस्या हो, भए भर्ना लिन्छौं नभए केही गर्न नसक्ने जवाफ आएपछि झनै निराश थिए । त्यही बेला आफ्ना ठेकदारले गण्डकी अस्पतालमा बेड खाली भएको सुनाएपछि उनले त्यतै बाटो सोझ्याए । उनी गत बिहीबारदेखि गण्डकीमै छन् । मणिपालभन्दा गण्डकीमा धेरै सहज भएको उनी सुनाउँछन् । ‘यहाँ आएर एक पैसा पनि तिर्न परेको छैन,’ उनले राहत महसुस गरे ।
पश्चिमाञ्चलमा आएपछि उनी छोराको रेखदेखमा तल्लिन थिए । अस्पतालबाट शिशुलाई पोजेटिभ देखिएकोले बावुआमाको समेत पिसिआर चेक गर्न अस्पतालको सुझाव आयो । स्वाब दिए । बिहीबार दुवैको रिपोर्टमा पोजेटिभ देखियो ।
छोरालाई निको हुँदै थियो तर आफूहरु दुवैमा कोरोना पाजेटिभ भएपछि उनीहरु झन् चिन्तामा छन् । छोरा भेट्न नपाउनुको पीडा एकातिर छ, आफूहरुभन्दा पहिला छोरा सन्चो भएमा कस्ले हेरिदिन्छ भन्ने अर्को पिर ।
दम्पतीको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको चिकित्सकले जनाएका छन् । डिस्चार्जछि खर्च कसरी धान्ने भन्ने भनेर दुखेसो गर्छन्, जानबहादुर । ‘हामी दुवै जनाको अवस्था सामान्य नै छ । कोरोना त जसरी पनि जित्छौं,’ जानबहादुर भने, ‘यहाँबाट निस्केपछि खर्च कसरी धान्ने, २ महिना भयो कोठा भाडा नतिरेको ।’ उनले काम नपाएको २ महिनाभन्दा बढी भएकोे थियो । कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट सुरु भएपछि सरकारले निषेधाज्ञा गरेपछि उनको रोजीरोटी खोसियो । ज्यालामा गएका उनले दैनिक १ हजार लिएर आउँथे । त्यहीबाट बिहानबेलुकी छाक टार्नेदेखि आफ्नो र श्रीमतीको खर्च धान्ने गर्थे । कोरोनाले हुँदा खादाको घर बनाउने काम पनि नियमित हुन छाड्यो । ‘जम्मा गरेको पैसा मणिपालमा उपचार गर्दैमा सकियो,’ उनले भने,’ अब घरभाडा कसरी हो, अरु खर्च पनि कसरी चलाउने?’ गण्डकी अस्पतालले गरिब भए पनि धेरै सहयोग गरेको उनले बताए ।
यता, गण्डकी अस्पतालका बालरोग विभाग प्रमुख डा. रामचन्द्र बास्तोलाले कोभिड पोजेटिभ देखिएका बच्चाहरुका लागि अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने बताउँछन् । बच्चाका लागि निशुल्क भए पनि बावुआमाका लागि खानाका लागि अरु ठाउँबाट नै व्यवस्थापन गरिएको डा. बास्तोलाले जानकारी दिए । ‘बच्चाका लागि सबै फ्रि नै हो, आमाबुवाका लागि खाना आफँैले व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुको केसमा नसक्ने अवस्था भएका कारण न्यूट्रेसन रिह्याबिलिटेसन होममा भनेर खानाको प्रबन्ध मिलाएका छौं ।’